ime general insurance(ime general insurance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सले ४०% हकप्रद जारी गर्ने, सेबोनसँग माग्यो अनुमति
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले १०ः४ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले हकप्रद बिक्री गर्न अनुमति माग गर्दै हिजो बिहीबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा आवेदन दिएको हो। गत वैशाख १२ गते सम्पन्न कम्पनीको २३ औँ वार्षिक साधारणसभाले चुक्तापुँजीको ७ प्रतिशत बोनस सेयर वितरणको प्रस्ताव र बोनस सेयर जारीपछि कायम...
काठमाण्डौ । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको सेयर स्वामित्व परिमार्जन गरेको छ। कम्पनीले संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै सेयर स्वामित्व परिमार्जन गरेको हो। सेयर स्वामित्व परिमार्जन गर्न कम्पनीले १० लाख ४१ हजार ८२७ कित्ता संस्थापक सेयर सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गरेको छ। योसँगै अब...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र शंखरापुर नगरापालिकाबीच सम्पूर्ण निर्जीवन बीमा सेवासम्बन्धी सम्झौता
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र शंखरापुर नगरपालिका बिच नगरवासीको भौतिक सम्पत्ति, बालिनाली, पशुपन्छी तथा कृषकहरुको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गराउने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र शंखरापुर नगरपालिकाका तर्फबाट नगर प्रमुख...
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले नियामक बीमा समीतिबाट ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति पाएको छ। कम्पनीको गत वैशाख १२ गते २३ औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको थियो। सोही सभाले चुक्तापुँजीको ४० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने मुख्य अजेन्डा पारित गर्दै बीमा समितिमा स्वीकृतिका लागि पठाउने निर्णय गरेको थ...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको बीमा शुल्क आर्जन रु. ५१.८२ करोड, नाफा ७५.६३%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ५१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बढी खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ४२.८९ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीको बीमा शुल्क आर्जन ३६ करोड २७...
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको एजीएमबाट ७% बोनस र ४०% हकप्रद जारी गर्ने अजेन्डा पारित
काठमाण्डौ । बोनस र हकप्रद अजेन्डा अनुमोदन आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको २३ औँ वार्षिक साधारणसभा आज आइतबार सम्पन्न भएको छ। कम्पनीको वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित चुक्तापुँजीको ७ प्रतिशतले हुन आउने बोनस सेयर अनुमोदन गरेको हो। साथै, सोही सभाले बोनस सेयर वितरणश्चात हुने कम्पनीको चुक्तापुँजीको ४० प्रतिशत...
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको आज सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बोनस सेयरका लागि आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। समायोजित मूल्यअनुसार अब यो कम्पनीको प्रतिकित्ता १ हजार १७५ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो...
आजसम्म कायम सेयरधनीले आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको लाभांश पाउने
काठमाण्डौ । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिटिमेडले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका रहेको छ। कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा र लाभांश प्रयोजनका लागि आउँदो वैशाख २ गतेबाट सभा सम्पन्न नहुन्जेलसम्मका लागि बुक कलोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको मतलब भोलि वैशाख १ (नयाँ वर्ष) को सार्वजनिक बिदा भएकोले आज चैत ३१ गतेसम्म...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, लाभांश र हकप्रद जारी मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो २३ औँ वार्षिक साधारणसभा डाकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो शुक्रबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो वैशाख १२ गते आइतबार आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको नक्सालस्थित कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय बिहान १० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि...
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सद्वारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस कति ?
काठमाण्डौ । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको हिजो मंगलबार बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाबाट कम्पनीको हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब ८ करोड १८ लाख ३६ हजार रुपैयाँको कुल ७.३७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांशमा ७ प्रतिशतले...
काठमाण्डौ। आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले यही माघ ११ देखि १४ गतेसम्म कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ताका रुपमा कम्पनीसँग आवद्ध भई कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ताको तालिम सम्पन्न गरेको छ। बीमा समितिबाट जारी कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका, २०७७ बमोजिम कम्पनीले बीमा अभिकर्ता तालिम सम्पन्न...
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सको कम्पनी सचिवमा उमा जोशी नियुक्त
काठमाण्डौ । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको कम्पनी सचिवमा उमा जोशी नियुक्त भएकी छन्। कम्पनी सञ्चालक समितिको गत मंसिर १९ गते बसेको बैठकले जोशीलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको । उनको नियुक्ति मंसिर २१ गतेदेखि लागू भएको पनि कम्पनीले जनाएको छ। जोशीलाई कम्पनीले यो थप जिम्मेवारी दिएको हो। उनी सोही कम्पनीको कानुन विभागकी प्रमुख पनि...
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र हस्पिटल फर एड्भान्स्ड मेडिसिन एन्ड सर्जरी (ह्याम्स) बीच नगदरहित हस्पिटलाइजेसस सुविधा प्रदान गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र ह्याम्सका कार्यकारी निर्देशक डा. जोतिन्द्र शर्माले हस्ताक्षर...
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सद्वारा एजेन्टलाई भर्चुअल तालिम
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योेरेन्स लिमिटेडले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस(कोभड(१९) को असर र काठमाण्डौं उपत्यका लगायत देशको मुख्य मुख्य शहरहरुमा स्थानीय प्रशानले निषेधाज्ञा जारी गरेको यस विषम परिस्थितिमा पनि आफ्ना अभिकर्ताहरुलाई भर्चुअल तालिम को आयोजना गरेको छ । कम्पनीले गत भाद्र १० गते देखि १२ गतेसम्म निर्जिवन...
आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सले डाक्यो साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्नो २२ औँ वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले यही फागुन २४ गते शनिबार काठमाण्डौको लैनचौरस्थित लैनचौर बैङ्क्वेट्समा सभा डाकेको हो। सभामा गत आर्थिक वर्षका लागि सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने भनी प्रस्तावित गरिएको लाभांश पारित हुनेछ। कम्पनीले...